ကိုယျဝနျတားဆေးထိုးခွငျးနှငျ့စပျလဉျြးသော မေးခှနျးမြား - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကိုယျဝနျတားဆေးကို အချေါအဝျေါအားဖွငျ့ depo လို့ချေါပါတယျ ။ ကိုယျဝနျမရစရေနျ တားရာမှာ အလှနျ အကြိုးရှိပါတယျ ။
တဈခါထိုးရငျ ဘယျလောကျခံသလဲ ?
သုံးလခံဆေး တဈလ ခံဆေး အစရှိသဖွငျ့ ရှိပါတယျ ။
နီးစပျရာဆေးခနျးသို့ သှားထိုးရနျ လိုအပျပါတယျ ။ သငျ့ဆရာဝနျမှ အရငျဆုံး ကိုယျဝနျရှိမရှိ အရငျဆုံး ဆီးစဈပါလိမျ့မယျ ။ ထို့နောကျ သငျ့တငျပါးနရောသို့ ထိုးနှံပေးပါလိမျ့မယျ ။
တားဆေးထိုးပွီး ဘာတှေ သတိပွုရမလဲ ?
တားဆေးထိုးပွီးပွီးခွငျး အာနိသငျခငျြခွငျးမပွနိုငျသေးပါ ။ သို့ကွောငျ့ ထိုးပွီး တဈပတျအတှငျး လိငျဆကျဆံရာတှငျ ကှနျဒုံသုံးပေးရနျ လိုအပျပါတယျ ။
တဈခါထိုးပွီး နောကျတဈကွိမျ ဘယျအခြိနျမှာ ပွနျထိုးရမလဲ ?
စတငျထိုးသညျ့ရကျမှ နောကျ သုံးလအကွာ ထိုရကျမတိုငျမီ တဈပတျစောပွီး ဆရာဝနျဆီပွနျသှားရနျလိုအပျပါတယျ ။ အကယျ၍ ၃ လထကျကြျောပွီး ဖွဈပါက သငျ့ဆရာဝနျမှ ကိုယျဝနျရှိမရှိ ထပျမံစဈဆေးပါလိမျ့မယျ ။သို့မှသာ စိတျခလြကျခြ တားထားနိုငျမညျဖွဈသညျ ။
ဘေးထှကျဆိုးကြိုး ဘာတှရှေိသလဲ ?
ခေါငျးကိုကျတာ ၊ မူးဝတော ၊ မအီမသာဖွဈတာ အစရှိသညျတို့ တခြို့လူမြားတှငျ ကွုံတှနေို့ငျပါတယျ ။
တားဆေးထိုးရငျ ဝပါသလား ?
ကွာရှညျထိုးနှံသူတှမှော ဝစတေယျလို့ဆိုပါတယျ ။
ကောငျးကြိုးတှကေ ဘာတှရှေိမလဲ ?
သငျ့အနနေဲ့ သုံးလတဈခါမှသာ ထိုးရတဲ့အတှကျ အမွဲတှေးပူနစေရာမလိုသလို သောကျဆေးကဲ့သို့ ဆေးသောကျရနျမသှေ့ားခွငျးကိစ်စမြားမှလဲ ရှောငျရှားနိုငျမှာပါ ။
ဆိုးကြိုးတှကေရော ဘာတှရှေိမလဲ ?
ရာသီတဈခုနဲ့တဈခု ကွား အစကျအပြောကျလေးတှလောနိုငျပါတယျ ။ နောကျပွီး သငျ့အနနေဲ့ ဆေးတနျးဖွတျပွီးပွီးခွငျး ကလေးခငျြခငျြးရရနျ ခဲယဉျးပါတယျ ။ နောကျပွီး ကာလကွာရှညျ သုံးပါက ဝကျခွံထှကျခွငျး စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ပွောငျးလဲခွငျး ခေါငျးတခွမျးကိုကျခွငျး အစရှိသညျတို့ ဖွဈပှားနိုငျပါတယျ ။
ဒီဆေးထိုးလို့ လိငျကတဆငျ့ကူးစကျသော ရောဂါတှကေို ကာကှယျနိုငျပါသလား ?
ကိုယ်ဝန်တားဆေးကို အခေါ်အဝေါ်အားဖြင့် depo လို့ခေါ်ပါတယ် ။ ကိုယ်ဝန်မရစေရန် တားရာမှာ အလွန် အကျိုးရှိပါတယ် ။
တစ်ခါထိုးရင် ဘယ်လောက်ခံသလဲ ?
သုံးလခံဆေး တစ်လ ခံဆေး အစရှိသဖြင့် ရှိပါတယ် ။
နီးစပ်ရာဆေးခန်းသို့ သွားထိုးရန် လိုအပ်ပါတယ် ။ သင့်ဆရာဝန်မှ အရင်ဆုံး ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ အရင်ဆုံး ဆီးစစ်ပါလိမ့်မယ် ။ ထို့နောက် သင့်တင်ပါးနေရာသို့ ထိုးနှံပေးပါလိမ့်မယ် ။
တားဆေးထိုးပြီး ဘာတွေ သတိပြုရမလဲ ?
တားဆေးထိုးပြီးပြီးခြင်း အာနိသင်ချင်ခြင်းမပြနိုင်သေးပါ ။ သို့ကြောင့် ထိုးပြီး တစ်ပတ်အတွင်း လိင်ဆက်ဆံရာတွင် ကွန်ဒုံသုံးပေးရန် လိုအပ်ပါတယ် ။
တစ်ခါထိုးပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ဘယ်အချိန်မှာ ပြန်ထိုးရမလဲ ?
စတင်ထိုးသည့်ရက်မှ နောက် သုံးလအကြာ ထိုရက်မတိုင်မီ တစ်ပတ်စောပြီး ဆရာဝန်ဆီပြန်သွားရန်လိုအပ်ပါတယ် ။ အကယ်၍ ၃ လထက်ကျော်ပြီး ဖြစ်ပါက သင့်ဆရာဝန်မှ ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ ထပ်မံစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ် ။သို့မှသာ စိတ်ချလက်ချ တားထားနိုင်မည်ဖြစ်သည် ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဘာတွေရှိသလဲ ?
ခေါင်းကိုက်တာ ၊ မူးဝေတာ ၊ မအီမသာဖြစ်တာ အစရှိသည်တို့ တချို့လူများတွင် ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ် ။
တားဆေးထိုးရင် ဝပါသလား ?
ကြာရှည်ထိုးနှံသူတွေမှာ ဝစေတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
ကောင်းကျိုးတွေက ဘာတွေရှိမလဲ ?
သင့်အနေနဲ့ သုံးလတစ်ခါမှသာ ထိုးရတဲ့အတွက် အမြဲတွေးပူနေစရာမလိုသလို သောက်ဆေးကဲ့သို့ ဆေးသောက်ရန်မေ့သွားခြင်းကိစ္စများမှလဲ ရှောင်ရှားနိုင်မှာပါ ။
ဆိုးကျိုးတွေကရော ဘာတွေရှိမလဲ ?
ရာသီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကြား အစက်အပျောက်လေးတွေလာနိုင်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး သင့်အနေနဲ့ ဆေးတန်းဖြတ်ပြီးပြီးခြင်း ကလေးချင်ချင်းရရန် ခဲယဉ်းပါတယ် ။ နောက်ပြီး ကာလကြာရှည် သုံးပါက ဝက်ခြံထွက်ခြင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲခြင်း ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ခြင်း အစရှိသည်တို့ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ် ။
ဒီဆေးထိုးလို့ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်သော ရောဂါတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပါသလား ?